ချည်ပြားများဖြင့် နှင်းစိုနေသော သစ်ပင် လက်မှုပညာ On
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ, EVA ရော်ဘာနှင့်အတူလက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့တွေ့မယ် ဒီနှင်းကျတဲ့သစ်ပင်ကို ချည်ပြားတွေနဲ့ လုပ်နည်း. ဒီလက်ရာက အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့အပြင် စေးကပ်မှုလည်းမရှိတာကြောင့် အိမ်မှာရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်းကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ။
ဒီနှင်းကျတဲ့သစ်ပင်ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ကြည့်ချင်ပါသလား။
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ နှင်းပွင့်သစ်ပင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှင်းပွင့်သစ်ပင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
အပြာ၊ အစိမ်း သို့မဟုတ် အလားတူအရောင် ကတ်ထူပြားသည် ကောင်းကင်၊ နောက်ခံကို ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊
ကတ်ထူပြားကို ပင်စည်ပြုလုပ်ရန် အခြားအရောင်တစ်ခု။
ဂွမ်းထုပ်များ။ သူတို့ ဘယ်လိုပုံပေါက်နေလဲ အရေးမကြီးပေမယ့် ပုံမရှိရင် နည်းနည်းပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။
ကော်၊ အဲဒါက မင်းအိမ်မှာ ရှိတဲ့ နှစ်ထပ်တိပ်တောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကောင်းကင်က ကတ်ထူပြားကို ဖြတ်မယ်။ ငါတို့သစ်ပင် အရွယ်အစားကို ငါတို့ လိုချင်တယ်။
ငါတို့မှာ နောက်ခံရှိပြီဆိုရင် ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်။ သစ်ပင်၏ ပုံသဏ္ဌန်ကို ဆွဲပါ သို့မဟုတ် ကတ်ထူပြားပေါ်တွင် ပြုလုပ်ပါ။ အခြားအရောင် ၊ ဒါ က မင်း စိတ်ကြိုက် ။ သစ်ပင်ရဲ့ ပုံသဏ္ဌန်ကို ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဘေးကင်းဖို့ လူကြီးတွေ အမြဲရှိနေပါစေ။
ယခု ဤလက်ရာ၏ ရယ်စရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဂချည်ပြားချပ်များနှင့် ကော် သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်တိပ်တစ်ထုပ်ကို ရရှိပါမည်။. စားပွဲပေါ်မှာ ချည်ပြားအချပ်ပေါင်းများစွာ တင်ပြီး ကော်နည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် တိပ်အပိုင်းအစလေးတွေ တင်ထားမယ်...
ရိုက်ဖို့! နှင်းတွေကျနေတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ နှင်းတွေထူထပ်တဲ့ ရှုခင်းမှာကျန်နေစေဖို့ သစ်ပင်အကိုင်းအခက်တွေပေါ်မှာ ဒီဝါဂွမ်းပြားတွေကို ဝေငှပေးမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုခင်းတွင် နှင်းများကျနေလိုပါက နှင်းကျနေသော နှင်းများကို အတုယူကာ ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံး စက်ဝိုင်းငယ်များထည့်နိုင်သည်။
အဆင်သင့်။ ငါတို့ နှင်းတွေကျတဲ့သစ်ပင်တွေပြီးပြီ။ စင်ပေါ်တင်ထား၊ ပေးလို့ရသလို အိမ်မှာလုပ်ထားတဲ့ တခြားပုံတွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ချည်ပြားများဖြင့် နှင်းထူထပ်သောသစ်ပင်